Madaxweyne Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub Ingiriiska ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub Ingiriiska ee Soomaaliya
March 3, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweyne Farmaajo oo salaamaya danjiraha cusub ee Ingiriiska Ben Fender. [Xigashada Sawirka: Villa Somalia]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Axad ah waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub Ingiriiska u fadhiyi doona Soomaaliya.
Danjiraha cusub Ben Fender ayaa aqbalaada kadib kulan la yeeshay madaxweyne Farmaajo, waxaana ay ka wadahadleen labada dal iyo sidii sare loogu qaadi lahaa wadashaqaynta iyo iskaashiga taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dowladood, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay Villa Soomaaliya.
Sidoo kale, madaxweynaha iyo danjire Ben Fender ayaa ka wada hadlay in dowladda Ingiriisku ay xoojiso taageerada ay u fidiso dowladda Soomaaliya ee dhanka tababarka ciidamada booliiska iyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada.
Dabayaaqadii bishii Janaayo ee sanadkan, ayaa Ingiriisku Ben Fender u soo magacaabeen danjiraha Soomaaliya, isaga oo badalay David Concar.
January 30, 2019 UK oo safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya
Kenya oo sheegtay in nin Kenya u dhashay uu ka dambeeyay qaraxii gaariga ee ka dhacay saldhiga ciidamada KDF ay ku lahaayeen deegaanka Kulbiyow
Nairobi-(Puntland Mirror) Nin u dhashay dalka Kenya ayaa ahaa ninkii isku miidaamiyay gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa oo lagu qarxiyay saldhig milatari oo ciidamada Kenya ku lahaayeen deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose ee [...]